Oh…my beautiful people of Boqoji, where there is no potable water – Kichuu
HomeAfaan OromooOh…my beautiful people of Boqoji, where there is no potable water
Oh…my beautiful people of Boqoji, where there is no potable water
Oh…my beautiful people of Boqoji, where there is no potable water…..what have they given you here? This, Of all that you can say? pic.twitter.com/HgKmMAgOB3
— Tsedale Lemma (@tselemma) July 7, 2017
I just did a two minutes research and traced the root of such sloganeering in Ethiopia to January 1978, Wolemera Woreda 🙂 pic.twitter.com/Oxk9d2y5L3
— Zelalem Kibret (@zelalemkibret) July 7, 2017
Mid-rock Woliigalteen Laga-Danbii irraa Worqii Oomishuu akka Haaromuuf Gaafate.
Dhiyeenna kana Sheek Mohammad Al-Amuddiin “woliigaltee saamicha albuudaa Laga-Danbii naaf haaromsaa!” jedhaa jiraachuu dhageenneerra! “Woggaan digdamni natta xiqqaattee digdama biraa naaf daraa keessaa fooqqadhee isinirraa deemaa” jedhe jedhan Wuskii hambuuqqachaa!
“Albuuda Worqii kan Alaamuddiin angaawoota TPLF gugurdoo woliin saamaa jiru ahaadiin (contract ) isaa haa haaromuu mo hin haarominii irratti mariin jaarrolee woliin godhameera.” jechuun Giingamii Koyyaa gsbaaseera.
Akka giingami jedhutti “jaarroleen Kora san irratti hirmaatan martinuu afaan tokkoon “Alammuddiin waan tokkolle nuuf hin goone. Sa’aaf nama keenna kemikaalaan nurraa fixe. lafuma kalee nuuti irraatti dhalannee guddanne ardha miilaan keessa baya nudhoogge. Namaa fi sa’a keessa baye maaqii ykn dhoqqee woggaa 25 ol wolta tuulametti ari’ee keessa lixxisee lubbuu namaa, sa’aa fi bineensaa nurraa hobbaase. Waan tana Waaqaa fi Latti dhugaa teenna faana nuuf haa dhoottuutii ammaaf garuu Alammuddiin Nurraa Kaasaa” yaada jedhu dhiyeessan.
Odeeffannoon keessaa luqqaatee baate akka jettutti:
” Osoo an hin baasnee eenyutu baasa? Achuma horii irra tiffatu malee maal godhatu? Uummata duubatti hafaa, doofaa kana qaroomsine, mana barnootaa, kolleejii ijaarreef, miliyoona 27 kennineef, Hojiille nama kudhanii fi torba qaxaree jiraaf; kana caalaa maal barbaadan? jechaa kollaa qaca’aa Barakat woliin shampaagnii fi Wiskii dhudha’a jetti odeeffannoon keessa beektotarraa dhufte.
Dubbii albuuda naannoo Gujii keessaa bahuu ilaalchisee dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa guddaa barbaadu jedhee amana. Kanaafuu Rogeeyyiin teennalleen dhimma Finfinneetiin wol cinaa dhimma saamicha albuudaa dhaabsisuurratti akka woliin duullu waamicha godhuu barbaada.
Dubbii tana baldhinnaa fi had fageennaan Kan itti deebi’u ta’uu dhaamaa ammaaf asumaan nagatti jedha.
Via: Nagessa Oddo Dub
በነገራችን ላይ: ዶ/ር መራራ ጉዲና ማናቸው? Wazema BL 07/07/2017
Mirga Uummataa fi Babal’achuu Dimokraasiif Qabsaa’uu Koofin